विपन्न वर्गको आँखामा मेयर खत्री - Sarokar Khabar
२० चैत्र २०७६, बिहीबार १३:३४
विपन्न वर्गको आँखामा मेयर खत्री
२० चैत्र २०७६, बिहीबार १३:३४0
हुने खाने र हुँदा खानेकोवीच ठुलो अन्तर छ । मानवता हराउदै गएको शहरि परिवेसमा हुने खानेको दिनचर्या राम्रै संग वितेको छ । भने हुँदा खानेको दिनचर्या कष्टकर रुपमा विति रहेको छ । देश पुरै लकडाउन छ । यो अवस्थामा दैनिक मजदुरी गरेर जीवन चलाई रहेकाहरुको दैनिकि सम्झि नसक्नु छ । विहान ल्यायो बेलुका खायो अनि अतिकलि रहे विहान खाएर दैनिकि चलाउदै आएका त्यस्ता विपन्न वर्गहरुको घरमा नै पुगेर कमलामाई नगरपालिकाले तत्काल राहत प्याकेज बनाएर राहत दिई रहेको छ । ग्वाङ्ग खोलाको किनार तथा खहरे खोलाको किनारमा गिट्टीले धानेको जीवनलाई लकडाउनले दैनिकि ठप्प बनायो । यो अवस्थामा कमलामाई नगरपालिकाका मेयर खड्गबहादुर खत्री भगवान सरह सावित हुनु भएको छ ।
हाल तीन तहका सरकार रहेका छन् । अहिलेको बर्तमान अवस्थामा स्थानीय सरकारले यस्ता विपन्न वर्गहरुलाई सरकारको अनुभुति गराउने समय हो । यहि लक्ष्य अनुसार जिल्लाका स्थानीय तह लाग्नु पर्ने हो । कमलामाई नगरपालिका मेयर खड्गबहादुर खत्रीले अघिल्ला बर्ष यस्ता योजना ल्याए र कमलामाई नगरपालिकाको बृस्तृत विवरण तथ्याङ्क संकलन गरियो । बर्ष भरी श्रम गरेर मात्र खानेको तथ्याङ्क संकलन भयो । अति विपन्न वर्गहरुको स्वास्थ्य विमा पनि गरायो । पैसाको अभावमा एक नागरिकले राज्यले दिएको सेवाबाट बञ्चिन नहुन भन्ने उद्धेश्य मात्र थियो । यस्को जस सिंगो कमलामाई नगरपालिकाले लिनु पर्छ । यस्ता अन्य कामको सिर्जनशिलतामा मेयर खड्ग खत्री अझ क्रियासिल र सक्रियताका साथ लाग्नु पर्छ ।
विपन्न वर्ग को हो ? को होइन् ? भनेर नगरपालिकाले पहिला नै तथ्याङ्क संकलन गरेकाले कमलामाईलाई राहत प्याकेज अनुसार राहात उपलब्ध गराउन सहज भएको छ । हाल देशमा कोरोनाको संक्रमण हुन नदिएको लकडाउनले सवै ठप्प जस्तै बनेको छ । दैनिक मजदुरी गर्नेहरुले श्रम गर्न पाएका छैनन् । यो अवस्थामा उनीहरुलाई आधा पेट भर्न पनि मुस्किल छ । यस्तो अवस्थामा कमलामाई नगरपालिकाले विपन्न वर्गको पेट खाली नराख्न घरैमा पुगेर राहत वितरण गर्दै आएको छ । ता कि बल्ल विपन्न वर्गले थाहा पाए घर आगन कै सरकारले अप्ठेरो पर्दा यस्तो सहयोग पो गर्दो रहेछ । उमेर डाडो काट्न लागेको अवस्थामा पनि गिट्टीले दैनिकि धानेका ति बृद्ध–बृद्धा र ति अबोध बालबालीकालाई नगरपालिकाका मेयरले घरमा नै पुगेर राहत बाढ्दा उनीहरुका लागि मेयर भगवान सरह सावित भएका छन् । स्थानीय सरकारले विपन्न वर्गहरुको दैनिकिमा सहजता ल्याउने हो । उनीहरुका समस्यामा स्थानीय सरकारले हातेमालो गर्ने हो । के खाएर बाँच्ने भनेर अन्योलमा परेका बृद्ध–बृद्धा, असाहयलाई स्थानीय सरकारले सहयोग गर्ने हो । यो समयमा अनावश्यक प्रचारका लागि राजनितिक पूर्वाग्रह राख्ने समय हैन । सकिन्छ रचनात्मक सुझाव दिने हो । र घरमा नै बसेर यो संकटको समाधानका लागि सरकारलाई सहयोग गर्ने हो । विपन्न वर्गहरुको अझै पहिचान गरि नगरपालिकाले राहत वितरण गर्ने योजना अघि ल्याएको छ । यस्ता कार्यको नगरबासिले खुलेर प्रशंसा गर्न सक्ने बानिको विकास गर्न जरुरी छ । सदैव विरोधका लागि विरोध र नकरात्मक मानसिकता यो समयमा कति पनि आवश्यक देखिदैन । सवैको एकता बाट आइपरेको संकट समाधान गर्न सकिन्छ ।
न्यून आय भएका, विपन्न वर्ग विशेषतः शहरी मजदुर, गरिबहरूका लागि ‘नगर प्रमुख राहत प्याकेज’ त्यस्ता बर्गका लागि खुसीको कुरा छ । हिजो भुकम्पको विपत्तिमा भकारी भरी धान, बस्ने बासको राम्रै प्रबन्ध भएकाहरु एकमाना चामल र त्रिपाल लिन हारालुछ गर्नेहरुका लागि यो प्याकजेले पक्कै समेट्ने छैन । नसमेटोस पनि । त्यस्ता गरिखाने वर्गहरू ठूलो समस्यामा परेको, हातमुख जोड्नकै समस्या भएकोबारे स्थानीय सरकार जानकार छ । शोफा र महल अनि घुमाउने कुसीमा बसेर राहत प्याकेजको विरोध गर्नेहरुले एक पटक सोचौ मैले यो अवस्थामा श्रम गरेर दैनिकि धानेकालाई कति सहयोग गरे ! यो समय सामाजिक दुरी, व्यक्ति–व्यक्ति विचको दुरी कायम गर्ने बढाउने हो । तर सहयोगी भावनाको दुरी किमार्थ बढाउन सकिदैन । एक नेपालीलाई आपद् विपद् र अप्ठेरो परेका बेला टुलुटुलु हेरेर बस्ने त्यो नेपाली मन हुन सक्दैन । सक्छौ विपन्न वर्गहरुको पेट भर्ने र उनीहरुका समस्या समाधान गर्न साझेदारी गरौ । सक्दैनो त्यस्ता विपन्न वर्गहरुको लागि ल्याएको राहतमा गिद्धे नजर नलगाऔ । कमलामाई नगरपालिकाले यस्ता विपन्न वर्गहरुको अझै मन जित्न सकोस सिंगो कमलामाई नगरपालिकालाई धन्यवाद र मेयर खड्ग खत्रीलाई सलाम छ । सदैव गरिब, असाय विपन्नहरुले आपद् विपद् र अप्ठेरोमा परेका नगरबासिले एक पटक तपाईको नाम सम्झिउन । मेयर खत्रिबाट आगामि दिनमा पनि यस्तै रचनात्मक कार्यको अपेक्षा गर्दछु ।
कमलामाई नगरपालिका ३ सिन्धुली
बोधि श्रवण धर्म संघद्धारा कमलामाईलाई २ लाख १ सय २१ रुपैंया सहयेग
देवी स्वरुप पुजिन्छु रे नि म।आखिर सृष्टि रच्ने भगवान हो नि त म । तर किन म लगायत अनेक नामले पुजिने देवीहरुलाई अँध्यारो झ्यालखाना भित्र राख्न खोजिदै छ ? कतै मेरो अस्तित्व ढुङ्गाको मुर्तिमा मात्र त सिमित
केशव देवकोटाद्धारा केन्द्रिय सदस्यको उम्मेदवारी घोषणा २० चैत्र २०७६, बिहीबार १३:३४
गुट रहित पार्टी बनाई जिल्लामा कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउछु : पोख्रेल २० चैत्र २०७६, बिहीबार १३:३४
कविता : दिउ अरुलाइ नै दोष दिउ ! २० चैत्र २०७६, बिहीबार १३:३४
सेवा निवृत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू सम्मानित २० चैत्र २०७६, बिहीबार १३:३४
सिलवन्दी टेण्डर आह्वानको सूचना २० चैत्र २०७६, बिहीबार १३:३४
प्लानद्धारा कोभिड संकट ब्यवस्थापन केन्द्रलाई स्वास्थ्य सामाग्री प्रदान २० चैत्र २०७६, बिहीबार १३:३४
कोभिड–१९ अस्पतालाई स्वास्थ्य सामाग्री प्रदान २० चैत्र २०७६, बिहीबार १३:३४
गोलन्जोरमा कृषकलाई राँगा र बोका वितरण २० चैत्र २०७६, बिहीबार १३:३४
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको अनुरोध २० चैत्र २०७६, बिहीबार १३:३४
दुध उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन रकम वितरण २० चैत्र २०७६, बिहीबार १३:३४